ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းသစ်နေရန်နှင့်အဝတျအစားအပေါ် splurge ပါဘူး: ဖက်ရှင်ထွက်ပေါက် KUPIVIP.BY
KUPIVIP.BY အထူးကု - အမှတ်တံဆိပ်အဝတ်, ဖိနပ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, e-ဆိုင် - ဖက်ရှင်ဆိုင်များတွင်၏အခြေခံမူအကြောင်းဟောပြောသည်။ စတိုးဆိုင် catalog ထုတ်ကုန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ 90% အထိဈေးလျှော့အတူအမှတ်တံဆိပ်ပါဝင်သည်။
ဆိုင်အွန်လိုင်း KUPIVIP.BY ကြားခံအတူလုပ်ကိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ ယင်း၏ဌန်၌ထင်ရှားသမျှသောပစ္စည်းများ - တိုက်ရိုက်ဥရောပကနေ။ ဒါဟာသင်စျေးနှုန်းညှိနှင့် collection များကိုများ၏ဆက်စပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါထွက်ပေါက်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဈေးလျှော့ပေးဖို့ပျက်ကွက်အဖြစ်? branded ထုတ်ကုန်ရောင်းသောဥရောပအထူးစပါယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အခြေခံမူအတွက်အားလုံးဒီကိစ္စကို။ ထုတ်လုပ်သူအမြဲအမှုအရာရောင်းဖို့အချိန်သစ်ကို collection များကိုမတိုင်မီသက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်သိသိသာသာစျေးနှုန်းများလျှော့ချရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေလျက်ရှိသည်မရှိကြပါဘူး။
ထိုကဲ့သို့သောအဆိုပြုချက်ရှာနေ KUPIVIP, များသောအားဖြင့်သာ 1-3 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကြာရှည်ခံထားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဖက်ရှင်အိမ်များနှင့်ကြေညာရောင်းချမှုနှင့်အတူဆွေးနွေးညှိနှိုင်း။ ဒီဆိုးရွားစွာရောင်းအား၏အဓိက collection များကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအဖြစ်တံဆိပ်များ, ရေရှည်များအတွက်အထူးလျှော့စျေးပေးစေခြင်းငှါဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်။ ထွက်ပေါက်မှသာပစ္စည်းများအမိန့်ကယ်တင်တတ်၏။ ဤပို့ဆောင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်လျော့ကျစေပါတယ်ဂိုဒေါင်ဝန်ကိုမခွင့်ပြုပါတယ်ကိုလည်းစျေးနှုန်းများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ လက်ရှိအဆိုပြုလွှာဝက်ဘ်ဆိုက် KUPIVIP BY တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်အတူ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအရာခပ်သိမ်း၏နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား၏စစ်မှန်မှုကိုအာမခံပါသည်။ ဤအ parameters များကိုထိန်းချုပ်မှုအဆိုပါအွန်လိုင်းစတိုး၏လုံခြုံရေးနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဌာနများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို item ဖောက်သည်မှတင်ပို့မတိုင်မီစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
(အထက်တွင်အချို့ကိစ္စ၌) 80% အထိဈေးလျှော့နှင့်အတူ, သငျသညျဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အဝတ်အစား Trussardi ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ Up ကိုမှ 85% အဝတ်အစားတွေနဲ့ဖိနပ်ဖက်ရှင်အထီးအမှတ်တံဆိပ် Pal Zileri သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များဆက်ဆက်ပြင်သစ်တံဆိပ် BGN ၏အထိ 90% လျှော့စျေးအာရုံစိုက်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပရိုမိုးရှင်း collection များကိုအလွန်ရှည်လျားနိုင်ပါတယ်စာရင်းပြုပါ။ ဒါဟာငါ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိနဲ့အရာရာကိုကြည့်ရှုရန် သာ. ကောင်း၏။
အွန်လိုင်းထွက်ပေါက်အတွက်သင့်လျော်သောကမ်းလှမ်းမှုရှာရန်အမျိုးအစားနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာရှိနိုင်သည်အမျိုးသမီးများ, ယောက်ျား, သားသမီး, အိမ်သူအိမ်သားကုန်ပစ္စည်းများ, ဖိနပ်, အဝတ်, အိတ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဆိုက်ရောက်ပေးအပ်သီးခြားကဏ္ဍ။ အများစုမှာအရောင်းသက်ဆိုင်ရာအပိုင်းများတွင်တင်ဆက်ထားပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီရုရှား, ဘီလာရုစ်နှင့်ကာဇက်စတန်ရှိအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာယူနစ်ပါဝင်သည်။ သီးခြားယူနစ် - ဝန်ဆောင်မှုဌာနခွဲ KUPIVIP E-Sommerce န်ဆောင်မှုများ။
ထွက်ပေါက် 2008 ကတည်းကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ၎င်း၏တည်ထောင်သူ Oskar Hartmann - ရုရှားမှာက e-Commerce တစ်ခုမော်ဒယ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ရုရှား၌ပထမဦးဆုံးသောအခါမြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်သာမှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများသည်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်သောတံခါးပိတ်ရောင်းအားအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 2014 ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်နှင့်ရုရှားအတွက် e-commerce ၏စျေးကွက်အတွက်အသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီးကတည်းက။
Long ကဆင်မြန်း - အလှဆုံးပေါ့ပေါ့နှင့်ညနေပိုင်းစတိုင်များ
ဘွတ်ဖိနပ်, ခြေအိတ် - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များဖန်တီးနည်း
Plum "ဟန်ဂေရီရဲ့မော်စကို" - ဖျေါပွခကျြ
Swimsuit အတွက် Ornella Muti
မိဘများဖြစ်လာရှေ့အပ်ပေးသည်ကိုသင်တို့ 19 ကတိတော်များ
ကိုယ်ဝန် 32 ပတ်ကြာမှာကြိုးရှုပ်ထွေးမှု
White က sundress - နွေရာသီအဘို့အအလှဆုံးနှင့်ဖက်ရှင်မော်ဒယ်
ပြွန်၏ Baubles မျိုးကိုရက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရရှိ - အားကစားအာဟာရ
သေးနှစ်ပေါင်း 30 မလှန်ကြသူ 15 ဦးကတိပေးသရုပ်ဆောင်များကို
Borsch - အားလုံးအရသာ7ချက်ပြုတ်နည်းများ
Hummus - စာရွက်
တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးကိုစားသင့်ကြောင်း 14 အစားအစာများ